Ukuqaliswa kwe-iPhone 7, amanqaku kunye namaxabiso  Apple | IPhone iindaba
Kancinci kancinci, iindaba ezinxulumene I-iPhone 7, Ikamva le-Smartphone ye-Apple engekabi nawo umhla wokukhutshwa. Okwangoku silindele ukusebenza okutsha, iimpawu kunye nemizobo yokuqala ebonakalayo kwifayile ye- ikamva lesiphelo evela kwinkampani yeCupertino.
Iindaba malunga ne-iPhone 7
UApple ukhumbula zombini i-iPhone 7 kunye ne-iPhone 8 ngenxa yeQualcomm
Umlo u-Apple kunye neQualcomm onawo ubonakala ngathi okwangoku awukapheli. Okokuqala yayiyi China, ngubani ...
Inkundla yaseMunich iyakwalela ukuthengiswa kwe-iPhone 7 kunye ne-8 eJamani
por UJordi Gimenez yenzayo 3 iminyaka .
Ukubethwa okutsha kukaQualcomm kwidabi lokulwa neApple ngolwaphulo mthetho. Kule meko, kananjalo sinako ...
Ukuqwalaselwa, ukuba unayo i-iPhone 7 kuya kufuneka uyilungise imakrofoni
por UKarim Hmeidan yenzayo 4 iminyaka .
I-Apple ibonakala ingazisusi iingxaki, kwaye akunakwenzeka ukwenza iimveliso ezigqibeleleyo ... Enye yezona zinkulu ...
I-Apple iqala ukuthengisa i-iPhone 7 kunye ne-7 Plus kwicandelo layo elihlaziyiweyo
por UJordi Gimenez yenzayo 4 iminyaka .
Kwaye kukuba oomatshini beApple abayeki kwaye kwiintsuku ezimbalwa abasebenzisi abahlala ...
I-Apple iya kulungisa i-iPhone 7 ngokusilela kokugubungela simahla
por URuben inyongo yenzayo 4 iminyaka .
Kwi-2016 bekukho iimeko ezithile zabasebenzisi be-iPhone 7 entsha kunye ne-iPhone 7 Plus ...
I-iPhone 7 Plus ibiyifowuni yesibini ethandwa kakhulu e-China ngexesha le-2017
Intengiso yesmart e China inzima: uninzi lwabenzi kweli lizwe ngabavelisi abakhulu beetheminali ezinomdla kakhulu….
I-NAB inyanzelisa ukuba iApple isebenze kwiitshipsi ze-FM zezixhobo zayo
Isiteyitimenti samva nje esivela kubafana baseCupertino ngokubhekisele kwisicelo soMbutho kaZwelonke weSasazo (i-NAB) ...
I-iPhone yakho ngoku inokubiza ukutshaja ngaphandle kwamacingo kwiMophie's Charge Force
por ULuis Padilla yenzayo 4 iminyaka .
I-iPhone entsha ekugqibeleni ibandakanya ukutshaja ngaphandle kwamacingo, njengoko sinokubona kwi-Keynote yokugqibela evela kwi-Apple. Kakhulu…
I-iPhone 8 Plus vs iPhone 7 Plus Ngaba kufanelekile ukuba utshintshe?
Umboniso ngoLwesibini odlulileyo, nge-12 kaSeptemba, ushiye abasebenzisi abaninzi bebanda kakhulu. Iimpawu ezintsha ozifumeneyo ...
I-iPhone 7 Jet emnyama yexabiso eliphantsi ukuthenga kunanini na ngaphambili
I-iPhone 7 Jet emnyama yenye yeefowuni ezathi zatsala umdla wethu kwi-Keynote yokugqibela ye ...
I-Apple irhoxisa i-iPhone 7 (IMVELISO) BOMVU kwintengiso
I-iPhone ebomvu yayiyeyona nto intsha kulo nyaka, kwaye yayingumbala abasebenzisi abaninzi ...
IPhone 6 vs. I-iPhone 7: Uhlalutyo lwevidiyo ngomahluko wabo